I-AudioMob: Khalisa kwiintengiso zoNyaka oMtsha ngeNtengiso yeAudio | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2020 Ubuso bukaKristu
Iintengiso zomsindo zibonelela ngendlela efanelekileyo, ekujoliswe kuyo, kunye negama elikhuselekileyo lemveliso ukusika ingxolo kunye nokunyusa ukuthengisa kwabo kuNyaka oMtsha. Ukunyuka kwentengiso yeaudio kutsha nje kushishino ngaphandle kwerediyo kodwa sele kudala ibuzz enkulu. Phakathi kwengxolo, iintengiso ezirekhodiweyo kwimidlalo yeselfowuni zikrola iqonga lazo; Ukuphazamisa imboni kunye nokukhula ngokukhawuleza, iimveliso zibona ubungakanani obuphezulu bokubekwa kwintengiso kwimidlalo ehambayo. Kwaye abantu baya ngokuya bejikela kwimidlalo ehambayo, bekhangela iindlela ezintsha zokugcwalisa isithukuthezi.
I-AudioMob Nguvulindlela wale fomathi intsha: iNkulumbuso ye-Startups exhaswa yinkulumbuso yentengiso yeaudiyo kwimidlalo yeselfowuni. Ifomathi yentengiso yabo ikhuselekile ngokupheleleyo kwaye iyatshonisa, enokubakho ukuba uphawu lube nesibindi kunye noyilo lokufikelela kubaphulaphuli abaninzi.
Indawo yokubhengeza ixakeke kakhulu kunakuqala ngeli xesha lonyaka, kwaye iivenkile ezininzi zomzimba zivaliwe ngenxa yokutshixwa kwebala lemfazwe elikwi-Intanethi liya kuba lukhuphiswano ngakumbi kunangaphambili. Ke ngoko, iimveliso kufuneka zikrelekrele ngakumbi xa iintengiso zazo zichithe kulo nyaka ukufumana umda kunye nokufezekisa iziphumo abazifunayo; iintengiso eziviwayo zibonelela ngesithuthi esifanelekileyo sokwenza oku.
Abathengi bafuna amava entengiso angcono
I-2020 ibingunyaka ongekho omnye, kwaye ixesha elininzi lichithwe ekhaya, izibhengezo zakudala ziye zagcwala indawo yemithombo yeendaba. Ukutshixwa kwezinto kuqhutyelwe monotony kwihlabathi, ngomsebenzi ovela ekhaya, ukutya ekhaya kunye nokudlala ekhaya ngoku kuthathwa njengesiqhelo.
Ukuthengwa koNyaka oMtsha kulo nyaka kuya kujongeka kwahlukile: imigca ephuma emnyango kunye nokukrwela kwintengiso yokugqibela iya kuba yinto ebonakalayo. Ngeevenkile ezininzi ezivaliweyo kuluntu, ukuthengisa kuyathathwa kwi-Intanethi, kwaye abathengisi banokuthi balilumkele ixesha elomileyo. Ngomndilili weKrisimesi uchithe i-2020 kulindeleke ukuba yehle i-7% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, nge- £ 1.5billion enkulu, imikhankaso yentengiso kufuneka ijonge ekunyuseni umdlalo wabo ukugcina inkcitho yabathengi iphezulu.
Ukuzonwabisa sisiseko sobomi bokutshixiza, kunye nomabonwakude, ifilimu, iipodcast kunye nemidlalo ehambayo yonke into eya ngandlela thile yokuvala umsantsa phakathi kokuphambuka ekuhlaleni kunye nokunxibelelana okubonakalayo. Umcimbi weemveliso kukuvezwa okungaphaya kweefomathi zakudala: abathengi bashiyeka benqwenela into eyahlukileyo ngelixa amehlo abo eqaqambile kwesinye isibhengezo esiphindaphindayo esibonakalayo. Lo Nyaka uMtsha lixesha elifanelekileyo lokuba ii-brand zibeke indlebe emhlabeni, kwaye zithathe iindlela ezintsha zokuhamba phambili kukhuphiswano.
Izixhobo ezingafakwanga kubathengisi, imidlalo ehambayo iyodwa ivelise iipesenti ezingama-48 zerhafu yengeniso yemidlalo kwihlabathi liphela kulo nyaka, ene- enkulu $ 77 billion. Imidlalo yeeselfowuni yomelele kakuhle kulonwabo lokutshixa, kwaye ayisiyiyo eyolutsha olucingayo. Idemokhrasi yemidlalo iguqukile kule minyaka idlulileyo, kwaye intengiso yazo ekujolise kuyo ngesiquphe ibanzi kakhulu.
Namhlanje, iipesenti ezingama-63 zabadlala mobile ngabafazi abaneminyaka yobudala be-gamer yabasetyhini, iminyaka engama-36 ubudala.
IMediaKix, Izibalo zeGamer yabasetyhini
Imidlalo yemfonomfono inikezela ngethuba elikhulu lokufikelela kwi-brand ngokugxila ngokucacileyo ekujolisweni kwabantu. Iqonga linokunyusa abaphulaphuli abangafakwanga kwaye liqhagamshele iimveliso kubathengi ngokuthe ngqo. Ngamagama alula, imidlalo yeselfowuni inokuqhagamshela uphawu kunye nabaphulaphuli abangaphezulu kwe-2.5 yezigidigidi zabadlala umdlalo kwihlabathi liphela: eyona nto inokubakho ekufikeleleni kuyo kwimveliso yolonwabo. Ukuthatha ithuba kwintengiso yoNyaka oMtsha odumileyo, iimveliso kufuneka zimamele iimfuno zabathengi babo, kunye neemarike: ayizukuba yingqondo yokujika ingqalelo yabo kwimidlalo yeselfowuni njengomsinga omkhulu wengeniso.
Iintengiso zomsindo akusenguye umda osasaza i-megaphone ukusukela kumashumi eminyaka eyadlulayo. Zingaba zintle, zigudise, kwaye zenze amava abonisa ukudibana kwabantu okwenyani.
Ngezithethi ezilumkileyo ezincediswa lilizwi ukulungiswa ngokusisigxina kumakhaya amaninzi e-US, iintengiso zedijithali ezivakalayo zixhaphake kakhulu. Bamkelwa ngcono:
Ngama-58% abathengi abafumana iintengiso ezivakalayo zesithethi ezingenangqondo kunezinye iifom, ngelixa ama-52% athe nawo ayazibandakanya!
Ukusebenza kwexabiso kwintengiso yeaudio yeyesibini kuye 53% yabathengi wenze intengo esekwe kwintengiso yeaudio.
Kwimidlalo ehambayo, iintengiso ezirekhodwayo zingathathwa inyathelo eliya phambili lokuziva ngathi ziyinyani: zinokuntywiliselwa ngokupheleleyo kwisakhelo sokuyila, zinike ii-brand into entsha kunye nenomdla kwintengiso yazo.
Kuyenzeka ukuba wakhe umdlalo ujikeleze intengiso yomdibaniso ehlanganiswe ngokupheleleyo, ukongeza kumava onke kumdlalo weqonga: njengerediyo eyakhelwe-ngaphakathi kumzalwana omkhulu osandula ukwenziwa: Umdlalo, osebenzise ifomathi yentengiso yeAudioMob ukubonelela ngentengiso yeaudio ngexesha umdlalo.
Uphuhliso lwe-DSP oluyimpumelelo lubekiwe I-AudioMob kwi-helm yeentengiso zeaudiyo kwimidlalo, iba yifomathi eya isanda ngokuthandwa ngabaphuhlisi. Ukudumba kwendalo kokuya kwintengiso yomdlalo ongathandekiyo, kuqhuba umphambili womsindo kunye neziko.
Iintengiso zeaudio zenza ukuba abadlali baqhubeke nokudlala ngelixa bevezwa kwintengiso; Abaphazamiseki ngokwaneleyo ukuba bashiye umdlalo kodwa bazibandakanya negama. Kubathengi, kukuphumelela njengoko banokuqhubeka nokudlala umdlalo; yeemveliso, zisafumana ukubonakaliswa okukhulu kunye nokujolisa ngakumbi; kunye nabaphuhlisi banokuqinisekisa ukungaphazanyiswa kunye nokuntywiliselwa kwamava omsebenzisi.
Yimpumelelo yokuphumelela kunye nethuba lokuma ngaphandle kwesihlwele ngexesha apho iimveliso ezininzi zilwela inqanaba leziko.
Iintengiso zomsindo zikwindlela yokunyuka, kunye noqikelelo lokukhula kwengeniso kwe-84% ukusuka kwi-2019 ukuya kwi-2025, kwaye i-AudioMob ibonelela ngesisombululo esicocekileyo nesicocekileyo seempawu zokungena kwintengiso. Ngeevenkile ezininzi zomzimba ezivaliweyo kwaye amaphulo oNyaka oMtsha aba nobuchule ngakumbi, ibala lemfazwe leemveliso ligcwele isidingo sokuphakama ngaphezu kwabakhuphisana nabo.
I-AudioMob Imigca emibini yamathuba amakhulu eemveliso ukusika ingxolo yolu shishino: imidlalo yeeselfowuni yindawo ekhulayo ngokwendalo yokubeka intengiso kunye nabaphulaphuli abaninzi abafikayo ngelixa iintengiso zomsindo ziqhuba amava omntyilo kwaye ongaxakekiyo kumdlali.
Intengiso yomsindo inokunyusa ukuvezwa koNyaka oMtsha ngaphezulu kwe-2020, kwaye i-AudioMob iqhuba ishishini ukuba livelise ngcono, ngakumbi umdla kunye nokuntywila kwintengiso zomsindo.
Tyelela i-AudioMob ngolwazi oluthe kratya
tags: iintengiso zomsindointengiso yeaudiodsp yomsindoodiwiDSPintengiso yomdlaloimidlaloIntengiso yomdlalo wevidiyo
Ndasungula i-AudioMob kuba ndiyayiqonda into yokudana xa abadlali babo bephazanyiswa yintengiso. Ukudibanisa ezinye zezona ngqondo zibalaseleyo kumzi mveliso, isisombululo seAudioMob sibonelela ngendlela yabaphuhlisi bomdlalo weselfowuni yokwenza imali kwimidlalo yabo ngentengiso yeaudiyo ngelixa begcina abadlali babo bebandakanyekile.